DHACDO XANUUN BADAN: Meydadka Gabdho badan oo laga soo saaray PIZZA HOUSE & Sedex ka mida oo wada dhashay | afrikada news online
Weerarka oo ku bilowday Qarax Loo adeegsaday Gaari la dhigay inta u dhexeysa Maqaaxida loo yaqaan Pizza House iyo Meesha la yiraahdo Posh Treats ayaa kadib Qaraxa illaa 4 Dagaalyahan waxa ay gudaha u galeen Maqaaxida Piza House, kuwaas oo ka dhex billaabay Falal toogasho iyo Qaraxyo isugu jira Maqaaxidaasi.
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo gaaray meesha wax ka dhaceen ayaa muddo ku dhawaad 10 Saacadood ah dagaal kula jiray Dagaalamayahanada gudaha Maqaaxida Biza House ka dagaalamayay.
Waxaana inta la ogyahay Qaraxyada iyo dagaalka bar bar socday ee weeraradaasi ku dhintay 18 qof halka illaa 30 kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo u badnaa Rayid Maqaaxida iyo nawaaxigeeda ku sugnaa.
Dadka dhintay waxaa ku jiray Muwaadin Syrian ah oo Maqaaxida Piza House howlwadeenadeeda ka tirsanaa.
Inta dagaalka uu socday ayaa inoo suura gashay in Qadka Telfoonka ay ku haleelno qaar ka mid ah Shaqaalaha iyo Maamulka Goobaha la weeraray si ay uga bixiyaan faah faahin waxa halkaas ka dhacay iyo Khasaaraha ay ogyihiin.
Ugu horeyn Agaasimaha Posh Treats oo ah Haweeney Ethiopian ah dhalasho ahaan ayaa sheegtay in aysan fasax u qabin in ay ka warbixiso arrimaha xaruntooda iyo weerarka Al Shabaab ku qaadeen balse Malkiilaha Xaruntaasi ay faah faahin doonto.
Dhinaciisa mid ka mid ah shaqaalaha isla Posh Treats halka loo yaqaan oo wararka qaar ay sheegayaan in Bartilmaameedka ugu weyn ee weeraradii xalay uu ahaa ayaa isna faah faahin naga siiyay Sida looga soo bixiyay halkaas isagoo shaaca ka qaaday in laga soo badbaadiyay Posh oo weerarka uu saameeyay una dhow Piza house ee dagaalyahanada Al Shabaab ay ka dhex dagaalamayeen waxaana uu xaqiijiyay in indhihiisu qabanayeen 4 Dagaalyahan oo gudaha u sii galaya Pizza House.
Xarakada Al Shabaab oo sheegatay Masuuliyadda weeraradaasi ayaa wax ay tilmaameen in ay ku beegsadeen weeraradooda xarumo ay ku sheegeen in ay yihiin kuwa Lagu Tunto islamarkaana Kalaabyo ay falal ka baxsan Anshaxa diinta suuban ay ku sameeyaan Ajaanib iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Masuuliyiinta Dowladda iyo Saraakiisha Ciidanka Qalabka sida intaba sida ay hadalka u dhigeen.
Hay’adaha Ammaanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay ku guuleysteen in ay soo Afjaraan weerarkaasi saaka, waxaana Afhayeenka laamaha Amniga oo saaka la hadlay Warbaahinta sheegay in marka laga soo tago Qaraxyada iyo falalkii toogasho ee dhacay ay fashiliyeen Qaraxyo kale sida uu hadalka u dhigay.
Weeraradii xalay oo si weyn looga maqlayay hubka la isugu adeegsanayay inta badan Xaafadaha Muqdisho ayaa ku soo beegmaya iyadoo Magaalada Muqdisho ay ka soconayeen indhawaanahaan Howlgalka la Magac baxay Xasilinta Caasimadda kaas oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in uu yahay mid soo celiyay Nabad gelyadii Muqdisho.
Waana weerarkii ugu xooganaa oo muddo Saacado ah Al Shabaab ay heystaan goob Maqaaxi ah oo ay weerareen tan iyo markii Muqdisho uu ka bilowday Howlgalka Xasilinta Caasimadda.
Waxaa xusid mudan in weerarkaasi uu ku soo beegmay Saacado yar kadib markii Saraakiil ka tirsan Howlgalka Xasilinta Caasimadda ay ku dhawaaqeen in howlgalladoodii ugu dambeeyay Ciidamada Xasilinta ay ku soo qab qabteen Baangado iyo Tooreeyo halkii horay hub ay u soo qaban jireen taasina ay daliil u tahay in hubka ay ka sifeeyeen Muqdisho.
Sidoo kale waxaa isweydiin mudan sida ay ugu suura gashay dagaalamayaasha hubeysan ee weeraray Piza House, xilli habeen iyo Maalin la arkayay maalmihii la soo dhaafay Ciidamo ka tirsan Howlgalka Xasilinta Caasimadda oo ku sugan Isgoysyada iyo Kontaroolada Muqdisho islamarkaana baaritaanno xoogan ay wadeen iyadoona Masuuliyiinta howlgalka Xasilinta Caasimadda ay ku cel celinayeen in Darees aan ahayn kan howlgalkaasi aan lagu arki Karin Magaalada Muqdisho iyo Hub midka Ciidamadaasi ay ku howlgalayaan mid aan ahayn.
Hadaba waxaa laga wada dhur sugi doonaa cidda leh Masuuliyadda weeraradaasi ay ku fashilmeen Ciidamada Xasilinta in ay ka hortagaan iyo tallaabada dowladda cusub ay ka qaadato maadaama dowladda haatan ay sheegto in qorshayaasheeda ay ku shaqeyneyso ay ugu horreyso isla xisaabtan.